အခု လို အချိန် မှာ ဟိုပြေး ဒီပြေးဖြစ်နေလို့ အလှူလှူ ချင် တာတောင် အကြွေး နဲ့ လှူထား ရတယ် ဆိုတဲ့ “ပိုင်ဖြိုးသု” – GaMone Media
အခု လို အချိန် မှာ ဟိုပြေး ဒီပြေးဖြစ်နေလို့ အလှူလှူ ချင် တာတောင် အကြွေး နဲ့ လှူထား ရတယ် ဆိုတဲ့ “ပိုင်ဖြိုးသု”
ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ ဇနီးမောင်နှံတော့ လက်ရှိမှာ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့အရေးတွေကြောင့် ဖမ်းဝရံထုတ်ခံထားရပေမဲ့လည်း ဇွဲ မ လျှော့ဘဲ အမြဲတမ်းတက်ကြွစွာပါဝင်ပေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း ဝေဖန်ခံရမှုတွေတစ်ချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ နောက် မဆုတ်ဘဲ ရဲ ရဲ ဝင့်ဝင့်ရှိနေပေးလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေ ကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်သူလေး ဖြစ်ပါတယ်. ခုချိန်မှာ ပြည်သူ့အစိုးရဖြစ်တဲ့ CRPH အတွက် ပြည်သူတိုင်းက တတ်နိုင်သလောက်အလှူငွေ ထည့်နေကြတာ ဖြစ်ပြီး ပိုင်ဖြိုးသု တို့ကလည်း ထည့်ဝင်လှူဒါန်းချင်ပေမဲ့ ဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲ ကို သူမရဲ့လှူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ တင်ထား ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုချိန်မှာ ကိုယ်တွေလည်းဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့မို့ Visa Card မပြောနဲ့ Mobile banking တောင်သုံးဖို့ အခက်အခဲတွေနဲ့ဆိုသော်ငြားလည်း Federal Army ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် CRPH ကိုလှူချင်လွန်းလို့ UK ကအဒေါ်ကိုလှမ်းပြီး$500ဖိုးသမီးအစားလှူပေးပါလို့ ပြောပြီး အကြွေးနဲ့လှူထား တယ် …(အဒေါ်ခမျာ Screenshotတွေ ဘာတွေတောင်မလုပ်တတ်လို့ကိုယ်သင်ပေးလိုက်မှ သူ့ဘဏ်ကဖြတ်သွားတဲ့ statementလေးကိုပဲလှမ်းပို့ပေး ရှာတယ် ကိုယ်တွေကအဲ့လို တစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံး tech wizတွေ 🤣)နိုင်ငံခြားကမြန်မာတွေ လှူပေးတာကပိုအဆင်ပြေမယ် ထင်တယ် ဒီမှာက လူတိုင်းမှာ Visa card မရှိကြဘူ းဆိုတော့
လေ (သုသုနဲ့ကိုဏကြီးဆို နှစ်ယောက်ပေါင်းမှ တစ်ကဒ်ပဲ ရှိတာ)သူငယ်ချင်းတွေ လှူကြတာ လည်း နည်းနည်းခက်တဲ့လူ အတွက်ခက်တယ် တချို့ကျတော့လည်း လျှောလျှောလျူလျူပဲလှူလို့ရတယ်ပြောတယ်…နည်းနည်းခက်လည်း ဝိုင်းကြိုးစားပေးကြပါနော်…လှူလို့ရတဲ့ link ကဒီမှာပါ 👇ဆိုပြီးရေး တင်ထား ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ႐ိုက္တာဏႀကီးနဲ႔ ပိုင္ၿဖိဳးသုတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံေတာ့ လက္ရွိမွာ ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့အေရးေတြေၾကာင့္ ဖမ္းဝရံထုတ္ခံထားရေပမဲ့လည္း ဇြဲ မ ေလွ်ာ့ဘဲ အၿမဲတမ္းတက္ႂကြစြာပါဝင္ေပးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းေပၚမွာလည္း ေဝဖန္ခံရမႈေတြတစ္ခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ မဆုတ္ဘဲ ရဲ ရဲ ဝင့္ဝင့္ရွိေနေပးလို႔ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတြ ကို သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္သူေလး ျဖစ္ပါတယ္. ခုခ်ိန္မွာ ျပည္သူ႔အစိုးရျဖစ္တဲ့ CRPH အတြက္ ျပည္သူတိုင္းက တတ္ႏိုင္သေလာက္အလႉေငြ ထည့္ေနၾကတာ ျဖစ္ၿပီး ပိုင္ၿဖိဳးသု တို႔ကလည္း ထည့္ဝင္လႉဒါန္းခ်င္ေပမဲ့ ျဖစ္ေနတဲ့အခက္အခဲ ကို သူမရဲ႕လႉမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ တင္ထား ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခုခ်ိန္မွာ ကိုယ္ေတြလည္းဟိုေျပးဒီေျပးနဲ႔မို႔ Visa Card မေျပာနဲ႔ Mobile banking ေတာင္သုံးဖို႔ အခက္အခဲေတြနဲ႔ဆိုေသာ္ျငားလည္း Federal Army ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ CRPH ကိုလႉခ်င္လြန္းလို႔ UK ကအေဒၚကိုလွမ္းၿပီး$500ဖိုးသမီးအစားလႉေပးပါလို႔ ေျပာၿပီး အေႂကြးနဲ႔လႉထား တယ္ …(အေဒၚခမ်ာ Screenshotေတြ ဘာေတြေတာင္မလုပ္တတ္လို႔ကိုယ္သင္ေပးလိုက္မွ သူ႔ဘဏ္ကျဖတ္သြားတဲ့ statementေလးကိုပဲလွမ္းပို႔ေပး ရွာတယ္ ကိုယ္ေတြကအဲ့လို တစ္မ်ိဳးလုံးတစ္ေဆြလုံး tech wizေတြ 🤣)ႏိုင္ငံျခားကျမန္မာေတြ လႉေပးတာကပိုအဆင္ေျပမယ္ ထင္တယ္ ဒီမွာက လူတိုင္းမွာ Visa card မရွိၾကဘူ းဆိုေတာ့
ေလ (သုသုနဲ႔ကိုဏႀကီးဆို ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းမွ တစ္ကဒ္ပဲ ရွိတာ)သူငယ္ခ်င္းေတြ လႉၾကတာ လည္း နည္းနည္းခက္တဲ့လူ အတြက္ခက္တယ္ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ေလွ်ာေလွ်ာလ်ဴလ်ဴပဲလႉလို႔ရတယ္ေျပာတယ္…နည္းနည္းခက္လည္း ဝိုင္းႀကိဳးစားေပးၾကပါေနာ္…လႉလို႔ရတဲ့ link ကဒီမွာပါ 👇ဆိုၿပီးေရး တင္ထား ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
Previous post အနော်ရထာ မင်း ၏ ထူးဆန်း သော အိမ်မက် ကြီး (၃) ခု နှင့် နောက် ထပ် ပေါ်မည့် သာသနာပြု မင်းလောင်း
Next post သာယာလှ တဲ့ သူ့ရဲ့ မြို့လေးမှာ မမျှော်လင့် ဘဲ အသက်ပေး သွားခဲ့ ကြရတဲ့ ကလေးတွေအတွက် စိတ် ထိခိုက် ဝမ်းနည်းနေတဲ့ ပိုင်တံခွန်